Faah Faahino Dheeraad ah oo ka soo Baxaya Qaraxii Xalay ka Dhacay Magaalada Muqdisho (VIDEO)
Waxaa Xalay salaadii Maqrib kadib qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay Laamiga Maka Al Mukarama gaar ahaan meel u dhaw Hotelka Ambasador ee Magaalada Muqdisho.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaraxan gaariga loo adeegsaday iyo bartilmaameedkiisa, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in gaariga xiliga uu qarxyay laamiga socday halka warar kalana sheegayaan in gaariga laamiga dhinaciisa lagu barking gareeyay.
Inta la xaqiijiyay sadex qof oo shacab ah ayaa ku dhimatay qaraxan ka dhacay Laamiga Maka Al Mukarama, waxaa sidoo kale qaraxan ku dhaawacmay dad ka badan 5-qof kuwaa oo loola cararay gobaha caafimaadka.
Ciidamada amaanka dowlada federaalka ee Soomaaliya ayaa qaraxa kadib xiray laamiga gaar ahaan inta u dhaxeysa Isgooska KM-4 iyo Isgooska Shaqaalaha, waxa ayna ciidamada halkaasi ka sameeyeen baaritaan.
Wali lama oga bartilmaameedka rasmiga ah ee loo waday qaraxan caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana qaraxan uu dhacay xili maanta qeybo badan oo kamid ah magaalada ay xireen ciidamada amaanka ayna u diideen gaadiidka in ay isticmnaalaan.
Amniga magaalada muqdisho ayaa ahaa mid soo hagaagayay bilihii u danbeeyay, iyadoona laga hortagay qaraxyo badan oo lala damacsanaa in la soo galiyo gudaha magaalada Muqdisho.